KUDZIMA KWEMAGERMAN, KUMASHURE MAKUMA EGERMANY | Kudzidza ChiGerman, Kudzidza ChiGerman
musha » German Times uye Mitsara » German Present Time (Prasens)
UNGADZIDZIRA KUTI Uite FENOMENE UCHINYENGA INSTAGRAM FOLLOWER WINNING APPLICATION?
DZVANYA, DZVANYA ISANGANO, PONESA INSTAGRAM FOLLOWers.
GERMAN PRESENTATION, PRINCIPLES AND EXERCISES
Hello Almanx readers,
Muchidzidzo chedu ne almanx, takapinda munguva yekupedzisira ino uye takagadzirisa mitsara iri nyore kubva pakutevedzana kwenyaya yekuenderana.
Muchidzidzo chino, tichapa mamwe mashoko pamusoro pemazuva ano asina kupiwa uye isu ticharamba tichiine mitsara inoshandiswa.
Pano isu tichawanzofunga nguva uye mitsara.
Iye zvino, regai tienderere kune nhoroondo uye ngatitorei zvatisina kupa pamusoro penguva ino muchidzidzo chino.
Muchidzidzo chedu chekare, takataura pamusoro pekushandurwa kwezviito munguva ino.
MuchiGermany kune zviito zvakadai kuti kana nguva yemazuva ano ichiwedzerwa kune zviito, tsamba-e inowanikwa pakati pezviito uye nguva.
Iwe unoziva chikonzero nei?
Nokuti 3-4 consonants inosangana pamwe chete nenguva yemazuva ano zvikwata zvinowanikwa pamudzi wechiito.
Ndezvipi zviito izvi? Aya maito ndevamwe maitiro ane midzi anoguma ne t-m-n-d.
Kudzidza kunyanya kushandiswa kwezviito izvi kuchaita kuti basa redu rive nyore.
Kutaura: red - en
Kufema: ATM - Yakawanda
Kushanda: arbeit - en
Verenga: rechn - en
Iye zvino, ngatitorei mamwe maitiro echiito chatakapa kumusoro pamusoro pekusaita mafomu:
arbeitt kwete arbeitet
rechnst kwete rechnest
rechnt kwete rechnet
arbeite (pasina chido)
rechnen (hapana chido)
cast (pasina chido)
arbeiten (pasina chido)
rede (pasina chido)
Izvi ndizvo zvatichapa pamusoro pekushandurwa kwezviito munguva yemazuva ano.
Iwe unogona kuita mitsara yezviito zvepamusoro iwe pachako.
Muchidzidzo chinotevera tichaenderera mberi nenguva ino zvakare.
KUBVA KUBVA RISALE-İ NURUpenyu hukuru huri nyore. Mabasa anodiwa mazhinji.
KUFUNGA IZVI: Zita rechiGerman -i Hali (German Akkusativ) Kuverenga
Ndeapi Matoyi Aunofanira Kutengera Mwana Wako?
Goethe-Zertifikat C1 Kugadzirira Files
TAGS: 10. kirasi german nyaya inotaura, 9. kirasi german nyaya inotaura, German 10. class presentation, German 11. class presentation, German 9. class presentation, German 9. kirasi panguva ino, muchi German prasens hurukuro, German present time lecture, German present time example sentences, Mutauro wechiGermany anonyengetera, mitsara mumutauro wechiGermany